ITM 2019: maro ny loka natolotra | NewsMada
Nahomby tanteraka ny Hetsika iraisam- pirenena ho an’ny fizahantany (ITM), andiany 2019, natao teny amin’ny foibe CCI Ivato farany teo. Nikarakara azy ny Ofisim- pirenena misahana ny fizahantany eto Madagasikara ( ONTM), niaraka tamin’ny minisiteran’ny Fizahantany. Marihina, fa firenena vahiny nasaina manokana tamin’ity hetsika ity ny any Indonezia. Nampahafantarina, ny alakamisy teo, ireo tsara vintana, nandritra ny lalao antsapaka sy “tombola”, tamin’ity ITM ity.
Mandroso amin’ny fizahantany i Indonezia
Notsorin’ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny ONTM, i Boda Narijao, fa anisan’ny tanjona nikarakarana ny karazana lalao samihafa, ny ahafahan’ny Malagasy nitsidika ny ITM 2019 ny lanjan’ny fizahantany sy ny zavaboahary eto Madagasikara, ny aty amin’ny faritra manodidina ny ranomasimbe Indianina.
Nomarihiny manokana koa, fa tsy tongatonga ho azy ny naha firenena nasaina manokana an’Indonezia, satria ankoatra ny fitovizana amin’ny lafiny maro (ara-tantara, kolontsaina, endrika sy tarehy, ….), firenena efa tena mandroso amin’ny fizahantany ity firenena ity, ary ataony fanoitra hampandrosoana ny toekarena mihitsy ny sehatry ny fizahantany. Nisy rahateo tamin’ireo nahazo loka, hivahiny any Indonezia.